Mishonga yekufamba kuenda kuBrazil: Dzivirira zvirwere uye unakirwe nerwendo | Kufamba Nhau
Luis Martinez | 28/05/2021 10:40 | Brasil, Matipi
Kutaura nezvemajekiseni ekuenda kuBrazil zvinoreva kuzviita consejos, kwete yezvisungo. Izvi zvinoreva kuti hurumende yeBrazil haidi chero mhando yejekiseni kuti ipinde munyika. Kunze kwezvinodiwa zvinotorwa kubva kudenda (heino chinyorwa pa mipimo iyi nenyika), Iko hakuna mamiriro ehutsanana epamutemo ekushanyira nyika dzeRio de Janeiro.
Nekudaro, iwe unofanirwa kugara uchifunga kuti Brazil ndiyo nyika yechishanu pakukura pasirese. Iyo ine anopfuura mamirioni masere emakiromita emakiromita uye inosanganisira akasiyana akasiyana ese mamiriro ekunze uye nenzvimbo. Naizvozvo, zvinokurudzirwa kwazvo kuti gamuchira mamwe majekiseni kuti uende kuBrazilKunyanya kana uri kuenda kune mamwe matunhu.
1 Mishonga yekuenda kuBrazil, zvinopfuura kurudziro
1.1 Yero fever fever
1.3 Hepatitis A jekiseni
1.4 Hepatitis B yekudzivirira
1.5 MMR mushonga
2 Dzimwe nzira dzekuchengetedza parwendo rwekuBrazil
Mishonga yekuenda kuBrazil, zvinopfuura kurudziro
Sezvatakakuudza, nyika yeSouth America yakakura uye inosanganisira chikamu chakanaka che Amazon. Naizvozvo, iwe hauzodi mishonga imwechete kana iwe ukaenda kune yekupedzisira sekunge iwe uchizviita kune Rio de Janeiro, Semuyenzaniso.
Chero zvazvingaitika, pane akati wandei ayo anokurudzirwa zvakanyanya zvisinei nenzvimbo yaunoshanyira. Uye hapana chimwe chazvo chiri kuzokukuvadza, saka haurasikirwe nechinhu nekuchiisa uye kudzivirira njodzi yezvirwere zvine njodzi. Iwe unogona kukumbira musangano wekuzvidzivirira iwe mune chero yeiyo epasi rose ekudzivirira nzvimbo ye Ministry of Foreign Affairs yeSpain mu Iyi link. Asi, pasina kumwe kunonoka, tiri kuenda kuzotaura newe nezve majekiseni ekudzivirira kuenda kuBrazil ayo anokurudzirwa.
Yero fever fever
Iyo inotyisa aedes aegypti, iyo chikonzero cheyero fever
Ichi chirwere chakajairika munyika yeSouth America zvekuti, kusvika nguva pfupi yadarika, vakuru vayo vaida kubayiwa nhomba pachiri vasati vapinda munyika. Yero fever chirwere chinotapukira chinotapuriranwa nehumhutu nekuruma kwayo. Aedes aegypti, inonziwo mummy mosquito.
Ichi chipembenene chinotakurawo iyo nedengue, zvine ngozi, sezvo isina mushonga. Asi, kudzokera ku yellow fever, zviratidzo zvacho zviri, chaizvo, kupisa muviri, kutemwa nemusoro uye kurwadziwa musana, kuda kurutsa uye kurutsa. Kana ikasarapwa munguva, murwere anotanga kukura jaundice (nekudaro chirevo cheyero) uye nekutambura nemaronda. Chikamu chechipiri ichi chinopa kufa kweanosvika makumi mashanu muzana.
Naizvozvo, chirwere chakakomba kwazvo. Uye, sezvo zvisingakupi mari kuti ubaye jekiseni, rairo yedu kana iwe uchienda kuBrazil ndeyekuti iwe unogara uchizviita kuti uve wakadzikama. Chero zvazvingaitika, kana ukashanyira Amazon, yeuka kuti jekiseni iri harikudziviriri pane zvambotaurwa nedengue. Saka pfeka mbatya dzine maoko marefu uye shandisa mushonga unodzinga umhutu wakasimba.
Kusiyana neiyo yapfuura, chirwere ichi chinotambura kana hutachiona Clostridium tetani inobata ronda. Sezvo iwe uchinyatso kuziva, izvi zvinogona kugadzirwa zviri nyore kwazvo, kunyanya kana iwe ukaenda kunzvimbo dzesango dzeBrazil. Uye iwe unofanirwa kuziva kuti mabhakitiriya ambotaurwa anowanikwa mukati chero yakasviba nzvimbo. Semuenzaniso, zvakajairika mune simbi yakasanganiswa.
Naizvozvo, hazvina kuoma kuti usangane naye. Ichowo, iyo clostridium generate neurotoxins izvo zvinokanganisa hurongwa hwese hwetsinga. Zviratidzo zvaro zvikuru kuputika, mhasuru, mhirizhonga uye kuoma mitezo. Ivo vari pamwe nefivha, yakanyanyisa kudikitira, uye kumedzera mate.
Kunze kwekutambura kwainokonzera, kana ikasarapwa nenguva, inogona kuuraya. Naizvozvo, sezvatakakurayira kare, hapana chaunorasikirwa nekubaiwa jekiseni rechirwere ichi.
Kune rimwe divi, jekiseni rekutetenasi rinowanzo sanganisira reiyo diphtheria and of the chikosoro, zvakare yakakurudzirwa kuti uende kuBrazil. Chekutanga chirwere chinotapukira chinopfuudzwa nemuromo, kunyanya nekukosora kana kuhotsira. Inokonzerwa nekufona Klebs-Löffler bacillus uye inogona kunyanya kuve yakakomba muvana vadiki.
Nezve kukosora, zvakare chirwere chinotapukira chekufema chinokonzerwa nehutachiona Bordetella pertussis. Hunhu hwayo spasmodic chikosoro uye chinotapukira zvikuru. Kunge yapfuura, inobata vana vadiki zvakanyanya. Zvisinei, kunze kwekunge zvichikonzera matambudziko, zvinowanzopora zvakanaka.
Hepatitis A jekiseni
Mutsetse wekubaiwa jekiseni
Ichi zvakare chirwere chinotapukira, chinokonzera kuzvimba kwechiropa. Iyo inogadzirwa, chaizvo, nehutachiona hwehepatitis A kana Paramyxovirus 72 uye haina kudzikisira pane mamwe maratidziro echirwere chimwe chete chatichazotaura newe.
Muchokwadi, haigone kuve isingagumi kana kukonzera zvachose chiropa kukuvara. Asi inogona kubvumidzwa zviri nyore, nekuti inopfuudzwa na chikafu chakasviba kana mvura, pamwe nekunze kwenzvimbo dzisina kuchena. Nechikonzero ichi, tinokukurudzira kuti ugeze maoko ako kazhinji, chimwe chinhu chisingazonzwike senge iwe nekuda kwekoriona.
Uye, hongu, tinokurudzira kuti ubaye majekiseni ekurwisa hepatitis A. Inovharirwa mumatanho maviri mwedzi mitanhatu yakaparadzana. Zviri nyore kuenda kuBrazil, saka unofanirwa kufunga nezvekugamuchira mushonga panguva yakanaka. Kuti ive izere, unoda mwedzi mitanhatu kuti ipfuure, sezvatakataura.
Hepatitis B yekudzivirira
Hepatitis B hutachiona
Tinogona kukuudza nezvechirwere ichi chinhu chimwe chete icho chataratidza chehepatitis A. Zvisinei, hunhu B ndehwe zvine ngozi, sezvo ichigona kugadzira chirwere chisingaperi uye izvi, zvakare, zvinogona kutungamira kukundikana kwechiropa, cirrhosis kana gomarara rechiropa.
Nekudaro, mune dzakawanda zviitiko hazvisi zvakakomba. Asi zvinogona kutora kusvika kumwedzi mina kuti zviratidzo zvioneke kubva panguva yawatapukirwa. Mune ino kesi, inopfuudzwa na mvura yemuviri. Semuenzaniso, ropa kana urume, asi kwete kubva pakukosora kana kuhotsira.
Uye zvakare, zvinopesana nezvinoitika nezvimwe hutachiona, hepatitis B inova isingagumi zviri nyore mukati Vechidiki kupfuura mumadhorobha. Nekudaro, zvakanakira kubaiwa jekiseni usati waenda kuBrazil. Muchiitiko ichi, iyo antigen ine maviri kana matatu maadhi akapihwa, zvakare, aine chinguva chemwedzi mitanhatu.
Mwana anogamuchira mushonga weMMR
Iri ndiro zita rakapihwa kune iro rinodzivirira zvirwere zvakaita se gwirikwiti, rubella, nehumuku. Chekutanga chirwere che exanthematic mhando, kureva kuti, chinoitika nematsvuku mapundu paganda, anokonzerwa nehutachiona, kunyanya kubva kumhuri bhandara. Chimwe chiratidzo chechirwere ichi chikosoro uye, kana chikapisa uropi, chinogona kunge chakakomba.
Kana ari rubellaIchowo chirwere chinotapukira icho chinoratidzawo nekuputika kweganda uye chinokonzerwa nehutachiona. Mune ino kesi, inopfuudzwa na airway uye zvinotora pakati pemazuva mashanu kusvika manomwe kuti azviratidze, asi zvinotapukira zvikuru. Nekudaro, kunze kwekunge mune mamiriro evakadzi vane nhumbu, haina kushata. Mune izvi, zvinogona kukuvadza iyo embryo ichikonzera kukuvara kusingaperi.
Pakupedzisira, the parotitis ihoshawo yakajairika. Zita rake ringangodaro risinganzwike serakajairika kwauri. Asi, kana tikakuudza izvo zvavari matumbuIwe wakanyatsonzwa nezvavo. Inofambiswa ne Anokanganisa myxovirus, kunyangwe paine zvakare musiyano unokonzerwa nehutachiona. Haisi zvakare chirwere chakakomba sekureba sekurapwa. Zvikasadaro uye mune zvakanyanyisa zviitiko zvinogona kutungamira kune meningitis, pancreatitis kana kushaya mbereko muvarume.
Mushonga weMMR unodzivirira zvese izvi zvirwere uye unopihwa muzvikamu zviviri mavhiki mana akapatsanurwa.
Dzimwe nzira dzekuchengetedza parwendo rwekuBrazil
Iwo atakatsanangurira kwauri ndiwo majekiseni ekudzivirira kuenda kuBrazil ayo anokurudzirwa nenyanzvi. Tinokukurudzira kuti uzviise kana uchizozviita. Asi, pamusoro pezvo, zvinokurudzirwa kuti uteedzere dzimwe nzira dzekuchengetedza parwendo rwako kuti hutano hwako husakanganiswa.
Nhanho yekutanga ndeyekuti iwe usayine iyo Kunyoresa Vafambi ye Ministry of Foreign Affairs uye kuti iwe unoshandira a kufamba inishuwarenzi yekurapa. Ramba uchifunga kuti Spanish Social Chengetedzo haina huchokwadi muBrazil. Naizvozvo, kana iwe ukazorwara, zvese zvinoshandiswa ivo vaimhanya vachishandisa iwe. Uye izvo zvinosanganisira kuchipatara, kurapwa uye kunyange kudzoserwa kumusha.
Kune rimwe divi, zvese zvipenyu zvinokurudzira kuti, kana uchinwa mvura, unonwa chete bhodhoro kumusoro, haambobva pombi kana zvitubu. Saizvozvo, michero nemiriwo yaunodya inofanira kunge iri yakashambidzwa zvakanaka uye disinfected.
Nezve mahombekombe, ita shuwa kuti haina kusvibiswa. Vhura Sao Paulo y Santa Catarina kune akatiwandei uko kugeza kunorambidzwa. Uye, kana iri mishonga, vatore kubva kuSpain kunzvenga kupererwa nazvo. Nekudaro, ivo vanogona kutariswa kwauri kunhandare yendege paunosvika. Naizvozvo, tinokurudzira kuti uuyewo neresipi kana gwaro rinoratidza kuti urikutora.
Chero zvazvingaitika, kana uine kusahadzika, tinokurudzira kuti iwe ushanyire iyo webhusaiti yeHurumende Yezvekunze kujekesa zvese izvo iwe uchiri kushamisika.
Mukupedzisa, isu takakuudza iwe nezve ese majekiseni ekudzivirira kuenda kuBrazil inokurudzirwa nenyanzvi. Hapana ane mhedzisiro, saka tinokukurudzira kuti uzviise. Uye, kana uchiri nekusahadzika, zvinokurudzirwawo kuti ubvunze chiremba wako. Nekudaro, iwe uchafamba zvakanaka uye uchirarama a chiitiko chinoshamisa kuti hapana chirwere chingakukuvadza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » America » Brasil » Mishonga yekuenda kuBrazil
Chaiwo chikafu cheVeracruz